Inqubomgomo Yokuthumela - hannari-shop
Yikuphi i-hannari ethwala ayisebenzisayo, futhi malini?
Mayelana nenqubomgomo yokubuya, sicela uchofoze LAPHA ukuze uthole imininingwane.
Ukuhanjiswa kwamahhala emhlabeni wonke!
Into izothunyelwa yonke indawo emhlabeni wonke isuka eJapan yi-DHL ngensizakalo ephelele yokulandelela.
Sithumela ekhelini elibhaliswe nekheli lokukhokha le-PayPal noma lekhadi lesikweletu Kuphela. Le nto izosongwa ngokucophelela kugoqo lwe-bubble kanye nesikhwama sepulasitiki, ifakwe ebhokisini lekhadibhodi.
Intengo yento noma izindleko zokuthumela azifaki imisebenzi yokungenisa noma imali. Lawa macala umthwalo womthengi. Uyacelwa ukuthi ubuze ihhovisi lamaCustom ezweni lakho ukuthola ukuthi lezi zindleko ezingeziwe zizoba yini ngaphambi kokuthenga. Asizigcini ngamanga amafomu amasiko - imithetho yase-US kanye nekahulumeni Wezizwe iyakwenqabela lokho.